George Anderson waa weriye Reer galbeed ah,wuxuuna sheegtaa inuu si wayn ugu dhuun daloolo arrimaha Somalia | dayniiile.com
Home WARKII George Anderson waa weriye Reer galbeed ah,wuxuuna sheegtaa inuu si wayn ugu...
George Anderson waa weriye Reer galbeed ah,wuxuuna sheegtaa inuu si wayn ugu dhuun daloolo arrimaha Somalia
George Anderson waa weriye Reer galbeed ah,wuxuuna sheegtaa inuu si wayn ugu dhuun daloolo arrimaha Somalia , in kastoo aan weli arrintiisa iyo jiritaankiisa noocaas ahba la xaqiijin,waxaa la sheegaa inuu la shaqeeyo Sirdoonka marayakanka CIA.
Ninkan ayaa maalmahan bilaabay inuu xogo kasoo gudbiyo waxa ka socda Villa Somalia,wuxuna sheegay in Maxamed Kaynaan laga dhigi doono Raiisul wasaaraha soo socda ee Somalia .
Maxamed Kaynaan ayaa horay uga soo shaqeeyey Xafiiska Raiisul wasaarihii hore ee somalia Xasan Cali Khayrre. Kaynaan sidoo ayaa sidoo kale soo noqday Afhayeenkii Guddigii Doorashooyinkii dadbanaa ee 2016-17.
Anderson ayaa dad badani ku tuhmayaan inuu u shaqeeyo Hay’adda Sirdoonka Caalamiga ah ugu qaybsan Maraykanka ee CIA, Waxa kale oo jira dad badan oo aaminsan ninkani inuu yahay Soomaali is qariya oo ka tirsan Sahan Group .
Ninkan ayaa horay ugu faanay inuu sii ogaa siina sheegay in Mahad Salaad laga dhigayo Agaasimaha Hay’adda Nabad Sugidda NISA,Sida idiinka Muuqata Qoraaladan uu soo dhigay bartiisa Twitterka .
Dadka qaarkood ayaa ku dhaliilay Dawladda cusub ee somalia in aanay siro badani u xafidnayn, iyadoo inta badan todobaadyo kahor lasii ogaa dad uu xilal u magacaabay Madaxweynaha cusub Xasan Sheekh, taasoo ah arin aan fiicnayn .
Waxa Qoray – Maxamed Xaaji .
Previous articleGuddoomiyaha Golaha Shacabka BJFS oo la kulmay Safiirka Jaamacada Carabta u fadhiya Soomaaliya
Next articleWasaaradda Waxbarashadda oo shaacisay Jadwalka imtixaanka fasalka 12-aad
Sacuudiga iyo Masar oo kala saxiixday heshiisyo ku kacaya ku dhawaad...
20 kamid ah musharixiinta isu diiwaangelisay Madaxweynaha 10aad JFS oo maanta...